Hlola iLechch Ness, eScotland - World Tourism Portal
Hlola iLechch Ness, eScotland
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eLoch Ness, eScotland
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeLoch Ness
Bukela ividiyo ekhuluma ngoLoch Ness
Hlola ichibi laseLoch Ness, Scotland'(uma kungenjalo ichibi lomhlaba elidume kakhulu) (noma' loch 'eScotland). Ugijimela i-37 km eceleni komgwaqo ongokwemvelo osuka eFort William entshonalanga yeScotland High, uye e-Inverness enyakatho.
Cishe imayela ububanzi bezindawo eziningi yikhaya elihlanzekileyo lesilo esikhulu saseLoch Ness, isidalwa esinganekwane, esihlala eLoch futhi kwesinye isikhathi sibonwa ngabantu bendawo nabadlulayo. Ukubona lokhu kukhomba ukuthi kungenzeka ukuthi iqembu labasindile kuma-plesiosaurs asebala ngokuphela (ababephila cishe iminyaka eyi-65 million edlule).
Izindawo eziphakeme zaseScotland zinethafa elihlanjululwe ama-glens (izigodi), iningi lawo linama-lochs (amachibi). ILoch Ness, umzimba omkhulu wamanzi e-UK.
Uchungechunge lwamasango okhiye emseleni lusiza ukukhulisa noma ukwehlisa imikhumbi.
ILoch Ness ingamamitha ayi-226 ekujuleni kwayo futhi iyindawo yesibili enkulu kunayo yonke yaseScotland nge-56.4 sq km.
ULech Ness unikeza ukubuka okumangalisa kwe-loch. Amagquma aminyene akhuphuka ehla evela emanzini amnyama e-loch. Kunezindawo eziningi zokupaka eceleni komgwaqo lapho izimoto zingapakwa khona nobuhle bendawo eyongiwe. Kunemigwaqo engasetshenziswa kancane ohlangothini olusempumalanga lwe-loch. Umjikelezo ophelele we-loch uhlanganisa cishe i-110 km. Ukushayela kule migwaqo kungaba yinselelo uma ungajwayele ukushayela ngakwesobunxele. Kungaba ngcono ukuthatha uhambo ngokulandela loch noma ukusibona ngesikejana.
Amadolobha / amadolobhana / Amakhaya
IDrumadrochit - Yindawo yokuma evakashele izivakashi ngomklomelo we-The Highlands and Islands Tourism Award, i-5 I-Loch Ness Center & Exhibition nenye i3 Star Nessieland castle Monster Center.
Isikhungo seLech Ness & Exhibition
Kusetshenziswa ukuxubana okusebenzayo kakhulu kwama-lasers, ukuqagela kwedijithali nemiphumela ekhethekile Umbukiso weLoch Ness umaka umlando wesilo ngokuhlola Scotland"Okwadalwa yimvelo, imvelaphi kanye namaphrojekthi ahlukahlukene ocwaningo enziwe loch. Iphinde iveze okutholwe kolunye lolo cwaningo kufaka phakathi iminwe yemvelo eshiywe ezingxenyeni ze-loch ngemvelo nangabantu.
Amanxiwa e-5 Star, i-Urquhart castle Castle Urquhart aqhele ngamakhilomitha amabili eStrone point. Umgwaqo we-831 usuka lapha uye kwezinye izindawo ezinhle, ekugcineni ufinyelela ku-Inverness.
I-Invermoriston - Isigodi soMfula iMoriston esizinikela kulo loch lapha, ngaphezulu kochungechunge lwe-rapids, singesinye esihle kakhulu kunawo wonke ama-glens aphezulu. Umgwaqo ufakwe ezihlahleni ezivuthiwe ezinhlangothini zombili ezakha indlela yobuhle bemvelo. Umgwaqo u-A887 uqonda endaweni eyi-Isle of Skye.
I-Fort Augustus - Inkulu kunawo wonke amadolobhana ase-loch. Kunehhovisi lezivakashi eduze kwepaki yezimoto. AbakwaHannoverian bakha uchungechunge lwezindawo zokuhlala ukuvikela iGreat Glen: iFort George eduze ne-Inverness, iFort Augustus enhliziyweni yeGreat Glen, neFort William ekugcineni kwaseningizimu.
IGlenmoriston - I-A887 isuka e-Invermoriston ibhekise entshonalanga neGlenmoristion ngasemfuleni uMoriston. Umgwaqo uxhuma ku-A87 phambili. Ubuhle bendawo bunconyelwe yibo bonke ukuthola okwesikhashana ukusuka kuthrekhi enkulu. Umuntu angahamba ngisho nama-20-25 amamayela ngaphakathi kodwa athi azungeze amamayela angu-10 noma angakhombisa isivakashi ukuthi sikuphi. Cishe amamayela ayi-5 ngaphakathi yiDundreggan Loch (iDundreggan isho 'igquma likadrako'). Kuyichibi lokufakelwa elenzelwe isizukulwane esisebenza ngogesi. Enye amamayela we-2 phakathi yiRedburn Café, indawo enhle yokudla, enamakhonkco e-ayisikhilimu afana neLoch Ness Monster.
UGlen Affric noGlen Cannich. I-A831 isuka eDrumnadrochit iye nedolobhana elikude leCannich, 12 amamayela ukuya entshonalanga. IGlen Affric neGlen Cannich zitholakala entshonalanga. ILoch Mulladroch yadalwa njengengxenye yohlelo lwe-hydro -gesi
IScotland iyizwe elinabantu abambalwa futhi yingxenye encane nje yalelo nani labantu abahlala eziNtabeni zaseScotland. Ngakho-ke, yindawo eyinyumba kakhulu. Imizana ezindaweni eziphakeme yizindawo ezincane ezihlanzekile ezinokulwa okuningi nomlando ngemuva kwazo. Kube yimpi yokulwa nemvelo futhi naphakathi kwabantu ukuze sisinde nobukhulu. Amanye amaphuzu athakazelisayo: Inani labavakashi abavakashela eScotland minyaka yonke lidlula inani labantu baseScotland kanti inani lamaScot abahlala ngaphandle kweScotland likhulu kaningi kunesibalo saseScotland.
IsiNgisi ulimi olusemthethweni lwe Scotland futhi kukhulunywa ngabantu abaningi noma abangaphansi kwabo. IGaelic ikhulunywa nge-60,000, futhi amagama amaningi esiGaelic asetshenziswa kaningi. AmaScot, njengabaningi baseBrithani, ngokuvamile bayachuma lapho behlala phesheya kodwa ekhaya benamakhono amancane ezilimi zakwamanye amazwe, yize labo abakwimboni ehlobene nezokuvakasha ngokuvamile benamakhono angcono ezilimi. IsiFulentshi, isiJalimane neSpanishi ziyizilimi zezinye izizwe ezaziwa kakhulu.
Ilungele ukuhamba kwe-Loch Ness
Izithuthi zomphakathi akuyona indlela enhle yokubona ukuthi le ndawo inikela ini. Inkinga ukungabikhona kwamabhasi, okukhawulelwe emigwaqweni emikhulu. Esikhundleni salokho, kunconywa ukuthi uqashe imoto, noma ujoyine iqembu lokuvakasha. Ukuhamba ngebhilidi ku-loch kusuka ku-Dochfour, noma eDrumumnrochit. Indlela enhle yokufika kulezi ukusebenzisa amabhasi enkampani yokuhamba (ngesinye isikhathi ancoma).
ILoch Ness Center kanye neMbukiso weLoch Ness Center kanye ne-Exhibition VisitScotland ebanjelwe i-5 Star isivakashi Eheha. Umbukiso uvulwe ngumhloli wamazwe uSir Ranulph Fiennes. Kuthatha izivakashi ezindaweni eziyisikhombisa ezihlukaniswe ngohambo kusuka ekuqaleni kokuya esikhathini kuya kwinkulungwane yesithathu. Ukuqonda kokubaluleka okubanzi kwe-loch. Yakhelwe futhi yalandiswa ngumholi weLech Ness Project, i-Adrian Shine yemvelo (i-Loch Ness Project). Ngenkathi ugcina isigaba sesikhungo semfihlakalo, sibekwa ngokuqinile esimweni se-loch enezakhiwo ezingavamile nezingajwayelekile: ezinye zisashukumisela ukuphuma lapho abanye "kungadala" izilo. Nansi imiphumela yalolo phenyo, usebenzisa uhlelo lwakamuva kakhulu lwabezindaba, imishini yokucwaninga yasekuqaleni namafilimu angempela angaphansi kwamanzi.
Imininingwane ye-Loch Ness. Le webhusayithi iphatha imfihlakalo yeLoch Ness ngendlela eyehlela emhlabeni futhi iqukethe izinsiza eziningi zabavakashi abangaba khona.
UNessie noma iLoch Ness Monster - Qaphela! Gcina amehlo akho evulekile, ubheke kakhulu, futhi unenhlanhla!
I-Urquhart castle. Isiza esidume kunazo zonke endaweni. Inqaba isemanxiweni kodwa incithakalo emangazayo enezindonga, ama-turrets amane nokugcina. Ubuhle bendawo obuhlanganiswa nomlando wayo buyenza ibe yinhle kangaka. Isikhundla senqaba eStrone Point siyamangaza futhi siyala ukubuka okubanzi kweLoch Ness. Kwakunenqaba ngaleso sikhathi kusukela ezikhathini zasendulo futhi isigodlo sasihlotshaniswa namagama amakhulu omlando weScotland anjengeSanta Columba (6th century) noRobert the Bruce (12-13th century). Ukuphela kwalethwa nge-bang ngonyaka wokugcina we-17th century lapho igcwele iziqhumane futhi yashaywa umoya ukuze ikwenze kungabi nalusizo kwabakwaJacob. Labo abavakashela isigodlo akumele bangaphuthelwa isethulo esibonisa imisindo ekhanyayo esikhungweni lapho, ngokuqinisekile singesinye sezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. Kukhulunywa ngesiNgisi kepha kuya ngokuthi izivakashi zezihloko ezingezansi zingezelelwa yini kwezinye izilimi. Vula unyaka wonke, ngaphandle kwe-25th kanye ne-26th Disemba. Kuvulwa: 9.30 am. Amathikithi okugcina athengisiwe: 3.45 pm (1st Okthoba to 31st Mashi), 5.45 pm (1st Ephreli to 30th September).
Ama-Lockgates kuCaledonia Canal, eduze ne-For Augustus
ICaledonia Canal - Izitebhisi zezikhiye ziyabonakala emgwaqweni uqobo njengoba unqamula umsele eFort Augustus futhi uwele umsele eduze nase-Inverness. Ilokhi ngayinye ingaphakamisa noma yehlise umkhumbi izinyawo ze-8. Kwaqalwa ku-1803 futhi kwaqedwa ku-1822 leli bhizinisi elikhulu kangaka lalixhaswe ngokuphelele nguhulumeni wosuku. (ICaledonia yayiyingxenye esenyakatho yeBrithani engaphezulu kolawulo lwamaRoma, icishe ilingane neScotland yanamuhla.)
Loch Ness nguJacobite. ILechch Ness ebhalwe nguJacobite yiyona ehamba phambili ehamba ngezikebhe ezinkulukazi ngezinkanyezi ezinhlanu kuLoch Ness. Ukunikeza ngezindlela ezahlukene zokuhamba nokuvakasha kuhambo lonke lwemikhumbi yabo. Yazi umlando, imfihlakalo kanye nomlingo kaLech Ness njengoba uhamba emanzini ajulile. Qiniseka ukuthi ubheka uNessie ohambweni lwakho ngemishini ye-sonar board. Uma kwenzeka isimo sezulu sikubeka phansi ungagcina womile ngaphakathi kwamasondo afudumele. Jabulela isiphuzo esishisayo noma isiphuzo kusuka kubha egcwele ngokuphelele ebhodini futhi uhlanganyele kokudla okulula okulula kakhulu kweSlackland. Vula unyaka wonke, ngaphandle kwe-25th ne-26th kaDisemba. Ukuqala kokuhamba ngomkhumbi ehlobo kusuka ku-0900hrs - 1600hrs kuwo wonke amaphuzu ahlukahlukene okuhamba. Ukuhamba ngesikebhe kwasebusika kuqala kusuka ku-1100hrs-1500hrs.
Ongakwenza eLoch Ness, eScotland.
Yindawo ukubona, ukudla nokuphuza kepha labo abafisa ukuthenga izikhumbuzo bangakwenza lokho kwizitolo ezincane. Isikhungo esisha seVakashele e-Urquhart Castle sinezitokwe ezinhle zezinto zezivakashi. Kodwa-ke, indawo efana neFort Willaim inikeza ukhetho olubanzi lwezingubo zaseScotland, ware woare, mementoes kanye ne-Scotch Whiskey. Iningi labavakashi bezokuvakasha eletha izivakashi ezivela Edinburgh hlinzeka ngekhefu lesidlo sasemini eFort William, lide ngokwanele ngaphezu kokubheka ezinhlobonhlobo kuphela.
Hiking izintaba - ILechch Ness yindawo ethandwa kakhulu ngabahamba ngezinyawo kanti iGreat Way Glen Way idabula ubude bechibi.
Indawo engesinye sezindawo eziheha izivakashi ezinkulu, asikho isikhala sokudlela. Ukudla kwasekuseni kuyikhanga elihle futhi kunokwehlukahluka okuningi okususelwa eBhulakufesi lasekuseni iBhulakufesi kuze kube yisidlo sasekuseni se-whole Day Isidlo sasekuseni sinele ukuze umuntu aqhubeke amahora amaningi. Ukudla kusekwe ngokwenyama. Inhlanzi iyatholakala futhi. Labo abafuna ukugwema bobabili kufanele babheke amasemishi emifino, ama-croissants kanye namasaladi.
Kuyinto eScotland futhi ngakho-ke umuntu akudingeki akhathazeke ngokutholakala kweziphuzo. Ukukhetha kungadala inkinga, ububanzi bebubanzi bukhona. Indawo eyodwa iyaqhosha ukuthi inemikhiqizo ye-1000 ye-malt Scotch whiskey eyodwa.
Zilungiselele ukubanda okungalindelekile nezimvula.
Uhambo oluningi lomqeqeshi luthatha izivakashi ezizungeze amaScotland Highlands kanye nokuvakasha eLoch Ness. Abavakashi kufanele babheke ukuthi yini enye abafuna ukuyibona ngaphambi kokuthatha isinqumo ngokuvakasha okuthile. Imininingwane eminingi iyatholakala ezingosini ze-Intanethi. Labo abafuna ukuhamba ibanga elincane bangahlela ukuvakashela isiqhingi esisodwa noma eziningi.
IGreatway Glen Way iyindlela eyi-73 amamayela amade ukusuka e-Fort William iye e-Inverness edlula eLoch Ness. Kuvulwe ngokusemthethweni e2002. Kungumsebenzi omkhulu kulabo abajabulela ukuhamba.